Awoodda ALLE: Haweenay hal mar umushay lix ilmood oo mataano ah+SAWIRO – SBC
Awoodda ALLE: Haweenay hal mar umushay lix ilmood oo mataano ah+SAWIRO
Posted by editor on January 14, 2013 Comments
31 sano jir u dhalatey wadanka Mexico ayaa maalinimadii Khamiistii ee aynu soo ka soo gudubnay waxay ku umushay 6 ilmood oo mataano ah Isbitaal ku yaal dalkaasi, iyadoo tani ah markii labaad ee ilmo mataano ah oo ka badan labo oo ay haweenaydan dhasho.
Salud Romero ayaa qoyskeeda ku kordhisay afar gabdhood iyo laba wiil oo mataano ah ka dib markii dhakhaatiirka Isbitaalka magaalada Morelia oo laba 230 Km u jirta magaalada Mexico ee caasimada dalka Mexico, iyadoo dhakhaatiirta caafimaadka deegaankaasi ay ku guuleysteen inay haweenaydan ku sameeyaan qaliin ay kaga soo saarayaan ilmaha ka dib markii la ogaadey in ay ku sugan yihiin xaalad khatar ah oo halis galin karta nolashooda, maadama ay aad u hooseyso qaab dhismeedka jireed.
Salud Romero 12 sano ka hor ay soo jiidatey warbaahinta ka dib markii ay hal mar dhashay afar mataano ah,
Joshua Salinas, oo 21 sano jri ah ahna ninka qaba haweenaydan lixda mataanaha dhashay isla markaana ah xoogsadey ay bishii soo gasho 100 ilaa 200 doolar ayaa sheegay inaanu xitaa ku fakarin in uu magacyo u bixiyo ilmahan u dhashay.
“Waxaan dareemayaa farxad sidoo kalena walwal ku aadan bad qabka iyo caafimaadka ilmaha dhashay, waxaan kaloo ka walwalsanahay sida aynu u maareyn karno xaaladooda dhaqaale ahaan” ayuu yiri Joshua Salinas.
“Waxaynu filaynay in Salud dhalayso shan ilmood, laakin in ay umusho lix waxay nala noqotey mid la yaab leh” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Joshua Salinas oo xaaskiisa laba goor ay u dhashay 10 ilmood.
Dkhaatiirta Isbitaalka ay haweenaydan ku umushay lixda ilmood ee mataanaha ayaa sheegay inay Salud oo laheyd uur 27 asbuuc ah ay go’aansadeen inay ku sameeyaan qaliin ka dib markii ay ogaadeen in ay ku sugan tahay dhiig yari.
Dr Rosalba Martinez oo qaybta cudurada haweenka u qaabilsan Isbitaalkaasi ayaa sheegay in ilmaha dhashay aanay eegmo ahaan muuqal fiicneyn balse ay haystaan shaqaale iyo qalab ay kula tacaalayaan xaalada caafimaad ee ilmaha mataanaha ah.
Hospital added: “Xaalkooda caafimaad hada heerkii la rabay ma ahan waayo, waa miisan yar yihiin, waxaana taasi ugu wacan la’aanta nafaqadii loo baahnaa ee ay ku heli lahaayeen intii ay uurka ku jireen, waana taasi mida keentey in aynu hada ku rakibno qalab ka saacida nafaqo jireed oo ay helaan” ayuu yiri Yara Pineda oo ah agaasimaha isbitaalka haatan lagu dabiibayo xaalada lixda mataanaha ah iyo hooyadood.
scw alaaaaaaaaaaah awoodaas leh isagaana bixiya
waa arin mucjiso ah dadkuna waa iney ku camal qaataan’allow caruurta ubad baadi qeyrna uga dhig
asc alaah baa wayn oo waaxida siduudoonuuna yeelayaa isaga kaliya ayaa awood leh
alaah baa wayn oo waaxida sidaana isaga kaliya ayaa yeelikara.
walaal waxaad maqaalka ku qortay in islaantu dhashay 12 sano ka hor 4 ilmood ninka qabana uu jiro 21 sano marka ilmihii hore ma waxa uu ku dhalay isaga oo jira 9sano bal arintaas qoraalkaas dib u eeg oo fiiri